Global Voices teny Malagasy » “Tanàna Miray i Esmeraldas” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Tanàna Miray i Esmeraldas”
Voadika ny 01 Jona 2018 3:43 GMT 1	 · Mpanoratra Viviana Velastegui, Dayana Caicedo Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena. Amin'ny alalan'ny famoronana zavon-teny mampiasa ny sehatra Media Cloud izay mikaroka angona media amin'ny fotoana iray manokana, afaka mandinika sy mifanakalo hevitra ny santatry ny fijery amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao ny mpandray anjara. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Dayana Caicedo sy Viviana Velastegui dia mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas  (Foiben'ny Tanora ao Esmeraldas), fikambanana momba ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadoro miara-miasa amin'ny ankizy, ny tanora sy ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ireo asany voalohany indrindra ny fandaharana isan-kerinandro amin'ny radio La Calle Habla  (Ny Resaky ny Lalana), toerana ho an'ny adihevitra sy resadresaka momba ny olana atrehin'ny fiarahamonin'izy ireo. Ity manaraka ity dia dikan-teny tamin'ny antsafa niarahana tamin'i Dayana sy Viviana raha nanadihady ny zavon-teny ho an'ny voambolana “Esmeraldas” sy “Paz” (fandriampahalemana) sy ny voambolana “Frontera,” (sisintany) manondro ny tanànan'izy ireo dia i Esmeraldas voakasiky ny ady manamorona ny sisintany itambarany amin'i Kolombia izy ireo.
Ahoana no tokony hisehoan'ny ‘Esmeraldas’ sy ‘paz’ (fandriampahalemana) ao amin'ny haino aman-jery?
Mino aho fa ny voambolana “firaisana” dia tokony eo satria tanàna miray izay miezaka hatrany handroso i Esmeraldas. Liana amin'ny soa iombonana izahay.
Ireo teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra 8.811 navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy ny volana Aprily 2018 ary nahitana ny teny “Esmeraldas” (lahatsoratra 5339) sy ny “paz” (lahatsoratra 9184) tao anatin'ny angon'ny Media Cloud tamin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniola tao Ekoadoro. (jereo akaiky kokoa ny sary )
Voambolana inona no tokony hita amin'ny zavon-teny ho an'ny “Esmeralda” sy “paz” (fandriampahalemana)?
Kolontsaina, firaisana, fitiavana.
Ahoana no tokony hisehoan'ny tanora sy ny sisintany ao amin'ny haino aman-jery?
Fandriampahalemana, fahanginana, fiarovana
voambolana manjaa avy amin'ny lahatsoratra miisa 3867 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 manonona ny “Frontera” (sisintany) ao anatin'ny angona Media Cloud roa an'ny sehatra fampitam-baovaon'i Ekoadaoro miteny espaniola. (Hijery lehibe kokoa )
Voambolana inona no tokony hananan'ny zavon-teny ho an'ny “sisintany”?
Rehefa miresaka momba ny “sisintany”, ny holazaiko dia hoe fahanginana, fanajana, fitoviana, sy fandriampahalemana ambonin'ny hafa rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/01/120422/
 Media Cloud : https://mediacloud.org/
 ady manamorona ny sisintany : https://www.theguardian.com/world/2018/apr/13/ecuador-colombia-journalists-military-strike-rebels
 jereo akaiky kokoa ny sary: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/jovennube.png
 Hijery lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/frontera-2018.jpg